पुरानो करारको प्रतिज्ञा तथा अगमवाणीहरूलाई पूरा गर्न आउनुभएको येशू ख्रीष्‍टको परिचय गर्दै मत्तीको सुसमाचारको पुस्तकले नयाँ करारलाई सुरु गरेको छ। येशूलाई अंगाल्‍नेहरूले उहाँको राजसत्ताको बारेमा गलत रूपले बुझेका थिए, र उहाँलाई इन्कार गर्नेहरूले उहाँले आफू यहूदीहरूका राजा र परमेश्‍वरको पुत्र भएको दाबी गर्नुभएको कारण उहाँलाई क्रूसमा टाँगे। यस अध्ययनको दोस्रो भागमा, सेलर्स एस. क्रेइन, जुनियर (Sellers S. Crain, Jr.) ले येशूको दाबी पाप र मृत्युमाथि गर्नुभएको उहाँको विजयद्वारा प्रमाणित भयो भन्‍ने कुरालाई देखाउनुभएको छ।
पाँच अध्ययन गाइड
छ वटा परीक्षाहरू
पठन गति गाइड
$5, 1-महिने विस्तार
कोर्समा के के हुन्छ ?
यो 50 दिने कोर्समा तपाईंलाई चाहिने सबै चिज हुन्छ । तपाईंलाई यो कोर्स पूरा गर्ने अधिक समय चाहिएमा तपाईं आफ्नो कोर्स अवधि अरितिक्त 30 दिन बढाउन सक्नुहुन्छ ।	केही नमूना कोर्स सामाग्रीहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
मत्ती १४—२८ द्वारा लेखिएको पुस्तक सेलर्स एस. क्रेइन, जुनियर (Sellers S. Crain, Jr.) पाठ्यक्रमको लागि तपाईको शिक्षक बन्नेछ र पाठ्यक्रम सकिएपछि तपाईले त्यसलाई राख्न सक्नु हुन्छ ।
तपाईंलाई पढ्दा ध्यान दिनु पर्ने मुख्य शब्द, अवधारणा, मान्छे तथा स्थानहरू प्रदान गरेर यिनले तपाईंलाई परीक्षाको लागि तयार हुन सहयोग गर्नेछन् ।
व्यवधान सृजना गर्न नभएर तपाईंलाई सहयोग गर्ने हिसावले निर्माण गरिएका प्रत्येक परीक्षामा तपाईंले सिकाइएको कुरा बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएका पठनबाट झिकिएका पचास वटा प्रश्नहरू हुन्छन् । अन्तिम परिक्षण विस्तृत हुन्छ ।
आफ्नो पठन गति गाइडको सहायताले आफ्नो पठन तालिकामा उल्लेखित भन्दा बढी पढ्नुहोस् । यो गाइडले तोकिएको समयमा कोर्स पूरा गर्न तपाईंले प्रत्येक दिन पढ्नु पर्ने पृष्ठहरूको बारेमा तपाईंलाई बताउने छ ।
यो पाठ्यक्रम तपाईलाई सहयोग गर्ने अतिरिक्त अध्ययन सामाग्री सहित उपलब्ध हुनेछ ।
© 2019 Through the Scriptures. सबै अधिकार सुरक्षित छ ।	म्याटमोनले लिटिल रक AR मा बनाएको